Date My Pet » Five Life Zvidzidzo Zvatakadzidza Kubva Cats uye Relationships
Last updated: Feb. 20 2020 | 5 Maminitsi verenga
Pandakatanga vakasangana mukomana wangu, Christopher, makore mashanu apfuura, Ndakanga chete peya imwe sandara shangu - scuffed majombo kubva kukoreji. Kufunga shure kwangu Rokutenderwa ruzivo, Ini chokwadi Ini kunyange vaipfeka navo 10 nguva, sezvo mukuru zvitsitsinho vakatakura dzakawanda nzendo dzangu uye kubva kirasi kutoti suduru echando zvemapuranga ari pazvivako, panguva iyo nguva ndaitopona achikanganisa. Horaiti, Ini embellished ekupedzisira (zvishoma.) A girly musikana munzira dzose, Ndakanga ndisingazivi sei kuti sweatpants runako kana wakasununguka kuratidza chiso changu pasina wakagadzirwa asingazivikanwi, uye handina kumbobvira vafanoona changed ichi. Asi akaita, uye ndinovimbawo kuti anoita kuti vamwe vakadzi, naizvo.
Kwete kuti pane chakaipa masikirwo uye stilettos - kunakirwa nazvo! Just regai kuvimba navo. Pandinotarisa magazini uye kuramba yakawanda vezvenhau rakatikomba, Handifaniri kuita kuti nei vakadzi vazhinji saka vari shaky pasi chivimbo dhipatimendi. Ini nemi zvinotevera zvidzidzo ndakadzidza kubva kushamwari yangu feline uye akarurama-kupfura murume muupenyu hwangu:
1. Vanobvuma nomumwe nyora dzako: Pane imwe yangu yokutanga misi chirimo pamwe Chris, I Akatya sei rakachenuruka Ndakatarisa uye kuita kuzvicheka-musuki wematehwe. Kana ini ndikati ndiri rakachenuruka, Ndinoreva ndine earabhasta inoganhurana translucent, saka izvi nokukurumidza-parumananzombe kwakatungamirira chinhu asi mitaro ine Orange uye kuzvidemba. paakanga (vachiziva) vakabvunzwa kana ini ndiinazvo kupfeka kuzvidzora musuki wematehwe, Ndakabuda yakachena (kunyange asiri chaiyo, sezvo zvaisanganisira vhiki exfoliation.) Akandibvunza nei ndaisasaruta kuita kuti kufunga ndaiva yakanaka uye isingawanzowanikwi ganda matauriro. Ndingadai ndambonzwa munhu anoreva ganda rangu kuti nzira, uye ndakanzwa saka mano kuti kuedza kuchinja chinhu rakasiyana ane chigadzirwa kuti yakafunga esimbi uye vakasiya pijama vangu uye madhirezi chena muddied.
nevadiwa vedu vanoda dzinotiratidza sesu, uye tinofanira kuda, naizvo. Zviri zvakafanana kuva kufambidzana Profile pikicha kuti anotarisa hapana akafanana nemi, photoshopped kare pfungwa kuzivikanwa. Tose akasiyana, uye zvinhu kuti tive vakasiyana zvakare tive timire kubva muchaunga. Tsvaga chivimbo kuratidza nyora dzako chaidzo uye usachiva vamwe '.
Kana katsi, ndizvo zvazviriwo. A Calico iri risisipo yakanaka anozivikanwa kupfuura tabby - zvose zviri neari.
2. Regai muviri nyadzi: Vaviri katsi dzangu duku, miviri avhareji vakai, uye vaviri guru. Havazivi ichi. chikuru katsi My akasvetuka pamusoro katsi hafu saizi yake nezvishamiso nei vari angasafadzwa mutsimba kutamba musi. Dai vakadzi chete aigona angamisa muviri-kupopotera isu tose anoshora uye oddly aivabatsira. Tinouya dzose nemhando maumbirwo uye hukuru, asi ndinonzwa vakawanda neshamwari dzangu kuenda uye vanenge vakanzwisisa muviri zvaunokanganisa. zvaanonzwisisa aya akabva pamwe kutya sei vanhu vanoona miviri yavo tichienzanisa Victoria kuti Secret yokutevedzera. Kuti mhando yokuzvidzora wehurukuro kunotungamirira kunanga zvatinoita panyaya kwete chete edu miviri, asi mitumbi zvavo. I vachadedera pandinonzwa prices akafanana, "Vakadzi Real vari curvy." Vakadzi Beautiful kuuya inofa zvitarisiko, saka ngatitarise Vanombundikira chero nhamba anoona isu kwedu healthiest muchimiro. Men havadi kunzwa isu kudambura miviri yedu, uye isu tose-zvakare-kakawanda kuaisa ezvinhu apo havagoni kuwana, zvisinei mhinduro dzavo. Kate Upton, Kate Winslet, uye Kate Moss zvose zvakasiyana anovaka, asi havasi vose kwose akaonekwa akanaka?
Nokuti chakarebesa nguva, Ini ndisingagoni kumira kuti makumbo angu akanga asina kuramba-dzakaonda, saka fungidzira Ndakashamisika apo Chris vakandiudza kuti aida makumbo angu uye akatikurudzira kuti ini vanopfeka zvakawanda zvikabudura uye masiketi. Munhu rworudyi kuenda kufanana muviri wako uye kwete kumanikidza kuti reshape nayo. Gara uchiyeuka kuti.
3. Nakidzwa chikafu: Ah, kunakidzwa inobata. Pandakaona zunzai kuti homwe ruchiva, zvose vatanhatu katsi angu akamurairawo mberi patsoka dzangu. Vanoda chikafu kusvikira kupi chiitiko. Ndiani mhosva? Kufanana nevakadzi vakawanda kudaro, I akarwa chikafu sezvo ini ndamboita-ataurwa pamusoro apa muviri nyadzi ndisina kunzwa zvakakwana svelte ari bhikini. I anorema makirogiramu mashanu zvino kupfuura apo Chris uye ini kuonana, asi mukutsinhana kuti, Ndava akagoverana mijenya pamusoro Pizza naye panguva Chishanu usiku TV binges. Handimbozvidembi ndichifunga kuti avo upi nhamba nedanda rechikero. Ndiri kure achinyatsoita muviri wangu pa zvakawanda 31 kupfuura zvandaifunga yaiva hwangu.
Kudya wakasimba pane chinoshamisa, uye ndiri mutendi akasimba achitarisira Kuzvidzidzisa (ona pazasi.) Noupenyu uye zvose zvayo siyana, Zvisinei, munhu akanaka chikuru chinhu, naizvo. Usatarisa zvikuru pamusoro wako mafuta yaunodya kuti vanorasikirwa uchiongorora kunakidzwa kudya - uye kukurukura kuti anoenda nayo.
4. Zvibate zvakanaka: Kana katsi dzangu vaneta, vava sehope. (Vari zvose aneta zvachose, zviya.) Kana mumwe katsi zvinovhiringidza kana pahunobata akasarudzwa nzvimbo, havana unhinhi mu kutaura kushora. Saka kazhinji, isu vanosimbisa pamusoro kutaura pfungwa dzedu, kana tikarega mumwe munhu abate nesu nenzira isu hatingavatengeri kubata mumwe. Cats, uye vanhu nyaya kuti, vane tsika muridzo kundoitora pamusoro chete, nokudaro chinofamba mberi noupenyu hwavo uye kwete tichiramba takagumbuka kana kuvava. Kunowanzosanganisira regai kutora zvinhu zvakadaro pachedu, uye ivo vanoziva kuti zviri nani kuti manzwiro ako vechokwadi vanoratidza pane kuti vaite chiito uye muridze kumusoro pashure.
Kutendeseka vachishoropodza muhukama, uye yakarurama naye kuchaita kukuda kunyange kana ungangonetseka pane loveable kunze nyika. Kana iwe unogona inzwi zvinongoratidza kuda, zvino sei mumwe wako ndichaipa kwauri?
Iri yakadaro zvakaoma mumwe, kunyanya kune vaya vanoedza akananga agreeableness. Zvingakunyaradza rubatsiro, edza kufunga mashoko zvinhu nenzira hamaizopa vanogumburwa kana vakanga kwamuri. kuti nzira, ramuri zvamunofunga vasina kurashikirwa hope pamusoro nyaya. Paunonyanya kuita izvi, zvikuru sezvingatarisirwa richauya kwamuri. In musha wangu, nechinoridzirwa muridzo uye purring zvose zvakajairika ruzha, ivo vaviri kunoratidza mhando ruremekedzo: nokuti vamwe uye isu.
5. Dziripo muna nguva: Ndinogara vakashamiswa sei katsi angu murinde shiri ine pfungwa yakafanana sei Chris anoridza yevhidhiyo. Chirevo chekare kwekumira kuti hwema Roses riri akakurumbira nokuda chikonzero - unounza akandidzosera shangu dzakakwirira.
My yekare shangu muunganidzwa aiva mamwe mavara akaisvonaka uye strappy kunatsiridzwa, uye ndichiri yakati vaviri vaviri shoma vakamirira rangu muwadhiropu nokuda zvakarurama hembe, kana kuti ichi vortex polar kuti chisanyanya kutaba. Apo Chris uye ndakaenda parwendo rwedu rokutanga vakaungana Las Vegas, Ini tamboita anenge mashanu nomwe, kufungidzira zvisingaperi sequins uye minhenga (pachena, mumusoro wangu, Vegas kwaireva kupfeka chakafanana showgirl.) Zvingani vaviri vaviri ivavo handina vanoguma ndakapfeka? Zero. pachinzvimbo, Target dzangu shangu kurova bhavhu kanyika kuti vhiki, uye ndinoyeuka kunzwa chaizvo ndaiva navo. vasikana vasingaverengeki akatambura yakatipoteredza mu pachikuva shangu, akaremara ne peep-pechigunwe kurwadziswa. Ndaida pachokwadi kuti vazvibayire pabhenji uye vamwe bhendi-anobatsira, Kuziva kuti rangu mangwanani maviri nokuzvidzora angadai vatamburira pedyo navo.
katsi My aisazombofa kurasikirwa tsindi-kuona chete saka vaikwanisa chechetere mbava yavo shure panzvimbo, uye handina kumbobvira angadai akaramba ainaye Chris akanga Ini Worn manyatera ane 4 padiki chikwidzo. kazhinji, yakanakisisa pazororo vanovimba musoro shangu uye kupedzera maawa kuita chaizvo hapana.
Upenyu zvose pamusoro kukura, uye ukama kungatibatsira kunzwisisa zviri nani pachedu sezvo tinogumburwa uye kubudirira. zvakafanana, Ukama vanogona kubatsirwa kuzvivimba, basa kuvimbika, uye anorega vamwe inobata ikozvino uye ipapo. ovimba, tinowana nengaidzo hisses zvakanaka uye (kunyanya) purrs munzira.